Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UBaituo Edolobheni laseDezhou, esiFundazweni saseShandong
Ngaphambilini, ngangazi kuphela ukuthi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwakusetshenziswa kuncike emaqhingeni kaSathane, ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ohlakaniphile nokuthi uSathane uyolokhu eyisitha esinqotshiwe kulolu daba, kodwa ngangingenakho ukuqonda noma ulwazi lwakho ngokusekelwe kwengihlangabezane nakho. Kamuva, kwaba sendaweni eyayihlelwe nguNkulunkulu kuphela lapho ngathola khona ukuhlangabezana nalolu hlangothi lweqiniso
Ngangisemhlanganweni ngenye intambama, lapho ngokungazelele umlingani womholi wesifunda agijima weza kimi wabe esethi, “Umama wakho uthathwe udrako omkhulu obomvu. Ungayi ekhaya okwesikhashana. Ibandla lizohlela umndeni ozokusingatha.” Lezi zindaba zangifikela ngokungalindelekile zangenza ngavele ngandwaza ngaso sona leso sikhathi: Ini? Umama uthathwe ngudrako omkhulu obomvu? Ingabe udrako omkhulu obomvu uzomhlupha kanjani? Ingabe uzokwazi ukubekezela? Kungenzeka ukuthi ngeke ngiphinde ngimbone umama wami futhi. Kufanele ngenzeni? Ngicabanga ngalezi zinto, inhliziyo yami yayibuhlungu futhi angikwazanga ukubamba izinyembezi zami. Emva kokuphela komhlangano, ngathathwa ngayiswa emndenini wami engangiwuhlelelwe owawuzongisingatha futhi, emva kokuba sengizinzile, imicabango yami yabuyela kumama wami futhi. Ekhaya, yimina engangisondelene kakhulu nomama. Yize noma ubaba wami owayengakholwa azama ukungiphoqa ukuba ngimshiye uNkulunkulu, udadewethu omdala wayengenandaba nami ngenxa yenkolo yami kuNkulunkulu kanye nazo zonke izihlobo zami zazingilahlile, kodwa ngangingakaze ngizizwe ngingedwa, ngoba ngangisenaye umama naye owayekholwa kuNkulunkulu. Noma ngabe ngokomoya noma ngokomzimba, umama wami wayehlezi enginakekela, engithanda, futhi ehlezi engisiza. Noma nini lapho nginenkinga ngangikwazi ukukhuluma naye ngayo; ungathi nje wayeyinsika yami. Kodwa manje ukuphela komuntu ebengikwazi ukuthembela kuyena wayesethathwe udrako omkhulu obomvu. Ngazizwa sengathi ngase ngiyintandane ngokuphelele, ngingazi ukuthi ngizohamba kanjani indlela eyayiphambi kwami, futhi ngingazi ukuthi ngizoya kubani uma izinto ziba nzima. Ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo, ngakhala usuku lonke, ngahlala nginobuhlungu obubeleselayo futhi ngazizwa ngiphansi kakhulu. Njengoba ngangihlala kulesi simo, ngingasakwazi ukuzikhulula, uNkulunkulu wangihola ngaphakathi kimina: “Ngempela ngempela uzimisele ukuhlala njalo ebumnyameni, uvumele uSathane akwenze isilima? Futhi ngempela awuzimisele ukuqonda uNkulunkulu emsebenzini Wakhe futhi uphile ekukhanyeni?” Ukuhola kukaNkulunkulu kwangivusa ebuhlungwini bami. Iqiniso lelo, ngazicabangela. Ingabe ngempela ngizohlala ngiphila kanjena ebumnyameni, ngivumele uSathane angenze isilima sakhe? Cha, ngeke! Lesi simo esingehlele kufanele nakanjani sibambe umusa kaNkulunkulu. Kamuva, ngaya phambi kukaNkulunkulu izikhathi eziningi ngikhuleka futhi ngifuna uNkulunkulu, ngicela uNkulunkulu angikhanyisele ukuze ngiyiqonde intando Yakhe.
Emva kwesikhashana, ngathola ukuthi ngangiqale ukungena kwamanye amaqiniso engangingazange ngiwaqonde ngaphambilini noma engangingazange ngikwazi ukuwasebenzisa. Ngangikade ngitotoswa ekhaya futhi ukudla, izingubo nokuzijabulisa kwakuthathe ingxenye enkulu yesikhathi sami. Inyama yami yayingazange ihlupheke futhi ingakwazi nokubekezela ubunzima obuncane nje. Ezinsukwini ezimbalwa emva kokuba ngihambile ekhaya futhi ngihlala nomndeni owawungisingethe, ngangingasakwazi ukwenza njengokuthanda kwami njengoba ngangenza ekhaya. Kancane kancane, isimo sami sokutotoswa kanye nemikhuba yami emibi yancipha, futhi ngathola ukwazi ukuthi ukuba nokudla nezingubo zokugqoka empilweni kuletha ukwaneliseka. Ngaphinde ngathola ulwazi ngomongo wenyama, ngingaphinde ngizame ukulangazelela ukwenelisa inyama, futhi ngathola ukwazi ukuthi ukufuna ukwenelisa uNkulunkulu yiyona into ebaluleke kakhulu umuntu odaliwe angayenza. Ngaphambilini, uma umama wami wayesekhaya, kungakhathaleki noma nganginezinkinga emzimbeni noma izinkinga empilweni yami, ngangihlezi ngincike kuyena futhi ngimvumele angisombululele zona. Uma ngihlangana nezinkinga, ngangingathandazi kuNkulunkulu, ngangingafuni iqiniso, futhi ngangingenabo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu. Emva kokuba umama wami ethathiwe, ngangingenamuntu engangingathembela kuyena lapho ngihlangana nezinkinga. Ngangizokwazi ukuza phambi kukaNkulunkulu kaningi ngikhuleke Kuye, ngidle futhi ngiphuze nakakhulu amazwi kaNkulunkulu, ngifune intando Yakhe nakakhulu. Kancane kancane, indawo umama wami ayekuyona enhliziyweni yami yaya ngokuncipha kancane, ngenkathi indawo kaNkulunkulu enhliziyweni yami yaya ngokuya iba nkulu. Ngazizwa sengathi uNkulunkulu wayengangisiza noma nini lapho ngidinga usizo, ukuthi ngangingeke ngishiye uNkulunkulu ngisho okwesikhashana. Phezu kwalokho, ngaphinde ngafunda ukuthembela emthandazweni kanye nokuthembela emizamweni yami yokufuna iqiniso ukuze ngisombulule izinkinga zami, futhi ngangiwuzwa kahle umuzwa wokuthula, ukuqiniseka kanye nokuthembeka okuhamba nokuba noNkulunkulu kimina. Ngenkathi ngihlala ekhaya, yize noma ngangazi ukuthi amakholwa nabangakholwa bayizinhlobo ezimbili zabantu ezingafani, ngangibona sengathi abazali bami nodadewethu omdala kwakuyibo kuphela abantu abangumndeni wami, futhi ngangihlezi ngibona abafowethu nodadewethu ebandleni njengabantu bangaphandle, ngaso sonke isikhathi ngizwa kunegebe phakathi kwethu. Emva kokuba uNkulunkulu esebenzise izimo ukuba “zingikhiphe” ekhaya lami, ngangihlezi ngindawonye nabafowethu nodadewethu emndenini wami owawusisingethe kusukela ekuseni kuya ebusuku, futhi ngangikuzwa ukungikhathalela nokunginakekela, ukubekezelela kanye nokucabangela kwabo. Sasikhuluma ulimi olulodwa, sinezintshisekelo ezifanayo futhi sisizana empilweni; enhliziyweni yami, ngabona ukuthi sengathi lo kwakuyiwona kuphela umndeni wangempela, ukuthi abafowethu nodadewethu kuphela ebandleni kwakuyibo ubaba, umama nodadewethu nabafowethu. Kwakungasekho lokho kungajwayelani phakathi kwami nabafowethu nodadewethu ebandleni, kungasekho kuqhelelana, futhi ngezwa imfudumalo ehamba nokuba nomndeni omkhulu. Ngenxa yendawo enjena nginabafowethu nodadewethu, ngaphinde ngafunda ukuthi singathandana kanjani, sixolelane futhi sesekane empilweni, ukuze ubuntu bami bokuqala buphinde bubuye. Leli qiniso yileli engangingakwazi ukulisebenzisa ngaphambilini, ngenkathi ngisahlala ekhaya futhi ngincike emihlanganweni nasezintshumayelweni. Emva kokuba umama ethathwe ngudrako omkhulu obomvu futhi ngaphoqeka ukuba ngishiye ikhaya, ngaphansi kwalezi zimo ezingajwayelekile futhi engangikade ngingazazi, uNkulunkulu walihlela leli qiniso ngaphakathi kimina futhi kancane kancane wajulisa ukuliqonda kwami. Phakathi nokungena kwami kuleli qiniso, inhliziyo yami yafuna ukuthanda nokwenelisa uNkulunkulu kwakhula kakhulu futhi injongo yami yokuphila impilo yami yonke ngiphilela uNkulunkulu yaqina nakakhulu. Umuntu engingakade nginguye—owayekholelwa kuNkulunkulu kodwa engenanjongo, owayeba buthakathaka njalo uma kuqhamuka izinkinga—wayebhekene noshintsho olwaluza kancane kancane. Lokho uNkulunkulu ayekubeke kimina ngempela kwakungaphezu kwalokho engangike ngakucabanga, futhi inhliziyo yami yagcwala ukubonga nokumtusa Yena.
Langa limbe, ngesikhathi somkhuleko wami, ngafunda amazwi kaNkulunkulu athi: “Ekwenzeni wonke lo msebenzi, akazange nje kuphela avumele abantu, abakhohlakaliswe uSathane, ukuthi bathole ukusindiswa Kwakhe okukhulu, kodwa wabenza ukuthi babone ukuhlakanipha Kwakhe, ubuninimandla onke kanye negunya Lakhe, kanti ekugcineni uzokwenza abantu babone isimo Sakhe sokulunga – ajezise ababi anike abalungile umvuzo. Ulwe noSathane kwaze kwaba namuhla kodwa akaze anqontshwe, ngoba unguNkulunkulu onokuhlakanipha, ukuhlakanipha Kwakhe kusebenza ngamaqhinga kaSathane. …Usawenza ngale ndlela engokoqobo nanamuhla umsebenzi Wakhe; phezu kwalokho, njengoba enza umsebenzi Wakhe wembula ukuhlakanipha nobuninimandla onke Bakhe …” (“Kumele Wazi Ukuthi Bonke Abantu Bathuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu ngokushesha akhanyisa inhliziyo yami, futhi akukho okunye engangingakwenza ngaphandle kokuphefumulela phezulu kusuka ekujuleni kwenhliziyo: UNkulunkulu ngempela unguNkulunkulu ohlakaniphile! Imisebenzi kaNkulunkulu iyamangalisa futhi isuke ingalindelekile! Lesi simo namuhla singificile, ngaphandle, kubukeka sengathi udrako omkhulu obomvu usemthathile umama wami, uthathe insika yami okungukuphela kwayo, wakwenza kwanzima kimina ukubuyela ekhaya, wazama kodwa wehluleka ukuvimba ukholo lwami kuNkulunkulu nokuthi ngivumele yena, noma ngibe buthakathaka bese ngiyayekelela ngokuba angesabise ngethonya lakhe. Kodwa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwenziwa ngokusekelwe kumacebo kaSathane. Wangikhipha esidlekeni sami esintofontofo wase, ngalesi simo, ethikameza amandla ami, waphelelisa amandla ami okubhekana nenhlupheko, wangiqeqesha ukuba ngibe nekhono lokuphila ngokuzimela, wangifundisa ukuthi ngingaphila kanjani ubuntu obujwayelekile kanye nokuthi ngingaba kanjani umuntu weqiniso; leli qiniso kwakuyinto engangingenakwazi ukuyiqonda, ngingenandlela yokuyithola esimweni sokhululeka nobuntofontofo. Ngenxa yalesi simo, uNkulunkulu walibumba leli qiniso Lakhe kanye nalokho ayikho empilweni ngaphakathi kimina, ngakho angizange nje ngiyekelele ngenxa yokushushisa kukadrako omkhulu obomvu kodwa, kolunye uhlangothi, ngathola iqiniso uNkulunkulu alibeke kimina futhi ngabekwa ngaphansi kwensindiso kaNkulunkulu. Phezu kwalokho, ngenxa yokushushisa kukadrako omkhulu obomvu, ngabona unya lwakhe, ubuso obungenamhawu kanye nemvelo yakhe ephindiselayo nangokucacile kakhulu. Kusuka enhliziyweni yami, ngamenyanya nakakhulu, futhi inhliziyo yami eyayifuna ukuthanda uNkulunkulu yaba namandla kakhulu.
Ngiletha ukubonga kuNkulunkulu! Ngenxa yokudlula kulesi simo, ngathola ukuqonda kweqiniso ngamandla kaNkulunkulu nobukhosi, futhi ngazuza ukudlula ezimweni zangokoqobo ngephuzu lokuthi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kusebenza ngokuncike kumacebo kaSathane. Ngaqonda ukuthi yonke into eyenzekayo engahambisani nemicabango yomuntu iyisenzo sikaNkulunkulu ngempela. Noma ngabe uSathane ufaka umfutho ongakanani kumacebo akhe, uNkulunkulu uyohlale enguNkulunkulu ohlakaniphile, futhi uSathane uyohlala eyisitha esinqotshiwe. Ngikuqonda lokhu, ukuzimisela kwami ukulandela uNkulunkulu manje sekuvuseleleke nakakhulu, futhi ngigcwele ukholo ngale ndlela ezayo!
Okwedlule：Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni
Okulandelayo：Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle
UKemu Edolobheni laseZhumadian, Esifundazweni saseHenan Engqondweni yami, bengilokhu ngizibona njengomuntu onobuntu. Ngike ngacabanga ng…
Ngazalwa ngawo-1980 edolobhaneni—sasiwumndeni wabalimi izizukulwane ezinngi. Ngazinikela ezifundweni zami ukuze ngikwazi ukuya ekolishi futhi ngibalekele impilo yasemakhaya yobumpofu kanye nokuba semuva.
UYi Ran eLaiwu City, eShandong Province Esikhathini esedlule, ngenxa yokungaqondi kwami umgomo ophathelene nokuhlelwa kabusha kwezisebenzi eba…
UYixin Edolobheni LaseShijiazhuang, Esifundazweni SaseHebei Ngaphambili, ngangivame ukuzwa abafowethu nodadewethu bethi, “Konke uNkulunkulu…